AMPPS - GNU / Linux ရှိ Web Development Environment ၏ပျော့ပြောင်းလွယ်ကူသော Linux မှ
ဖြေရှင်းချက်အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဝဘ်ဆာဗာ မည်သည့် platform ပေါ်တွင်မဆို (Webserver, English) operating systems (Windows, MacOS နှင့် GNU / Linux)သီးခြားစီလာနိုင်ပြီးအတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်၊ သို့မဟုတ်တစ်ခုအတွက်ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းနိုင်သောအပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည် လွယ်ကူပြီးကြံ့ခိုင်တပ်ဆင်ထိုကဲ့သို့သော၏အမှုအဖြစ် AMPPS.
AMPPS တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဘက်ပေါင်းစုံ software ကိုဖြေရှင်းချက် အတွက် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အသုံးပြုသော၏စီမံခန့်ခွဲမှုပေးထားပါတယ် လည်ပတ်မှုစနစ်များ ရှိပြီးသား။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့် application များကိုထောက်ပံ့ပေးသည် Apache၊ Mysql၊ MongoDB၊ PHP၊ Perl၊ Pythonအခြားသူများအကြားတစ် ဦး မှတဆင့် ဂရပ်ဖစ်အလိုအလျောက် installer ကို ၏ပုံစံအတွက် Softaculous.
ပြီးတော့၌တည်၏ GNU / Linux များ ၎င်းသည်ဖြေရှင်းချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အထူးသဖြင့်မြင့်မားသောအဆင့် (သို့) အရေးပါသောကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများ၏စည်းကမ်းချက်များအရ ပို၍ ကောင်းသည် Web server များ ၎င်းတို့ပေါ်ရှိ tool တစ်ခုချင်းစီကိုတပ်ဆင်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လက်စွဲခြင်းပေါင်းစပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုကိစ္စများရှိသည် လေ့လာမှုများ, သင်ယူ, သုတေသနသို့မဟုတ်ရွှေ့ပြောင်းaအခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းပလက်ဖောင်းအသုံးပြုရန်ပိုကောင်းသည် ပေါင်းစည်းဖြေရှင်းချက်ကျနော်တို့အကြောင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်ဆက်စပ်ပို့စ်တွင်မြင်သည်အတိုင်း XAMPP.
အ ပေါင်းစည်းဖြေရှင်းချက်သူတို့သည်အကောင်းဆုံးမဟုတ်သော်လည်းအမှန်မှာဖြစ်နိုင်သည် web applications များအမြန်နှင့်လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခွင့်ပြုပါ သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ add-ons များသို့မဟုတ်မောက်စ်အနည်းငယ်ကလစ်နှိပ်ပြီးချိန်ညှိချက်များသည်ကွဲပြားမှုကိုသင်ပြုလုပ်နိုင်သည် ပစ်မှတ်အောင်မြင်မှု မင်းရှာနေတဲ့ \_ t ကျောင်းသားများကိုသို့မဟုတ်ငယ်ရွယ် developer များသင်ပေး အပေါ်အလုပ်လုပ်ရန် Web server များ အခြေခံ GNU / Linux များ.
1.2.1 အဆင့် 1 - AMPPS ကို Download လုပ်ပါ
1.2.2 အဆင့် ၂ - AMPPS Installer ကိုအသုံးပြုခြင်း
1.2.3 အဆင့် ၃ - install လုပ်ထားသော AMPPS application ကိုဖွင့်ပါ
1.2.4 AMPPS အပေါ်မှတ်ချက်များ
၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသော package တစ်ခုဖြစ်ပြီး desktop နှင့် server ကွန်ပျူတာများတွင် open source web applications များစွာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
၎င်းသည်သေးငယ်သော်လည်းပြီးပြည့်စုံသောအခမဲ့ software package တစ်ခုဖြစ်ပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်း install လုပ်ပြီး MySQL ကဲ့သို့ပရိုဂရမ်ဘာသာစကားများကိုဒေတာဘေ့စ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုပေါင်းစပ်ပြီးအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြင့်ဖြန့်ဝေပေးသည်။ ထို့အပြင် PHP, Perl နှင့် Python applications များကို coding နှင့် testing လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
၎င်းသည် desktop ကွန်ပျူတာများတွင်၊ သင်ကြားခြင်းနှင့်သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှထုတ်လုပ်မှုသို့ကူးပြောင်းခြင်းသည်ချောမွေ့ပြီးချောမွေ့သည်။
AMPPS မှတစ်ဆင့် developer အဖွဲ့အစည်းသည်အခြားလူကြိုက်များပြီးအခမဲ့ open source application များကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။
၎င်းသည် Apache နှင့် MySQL တို့ကိုလွယ်ကူစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ ၎င်းအပြင်ပေါင်းစပ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများတပ်ဆင်ခြင်း၏အာမခံချက်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့် Security Center ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Databases သည် MySQL နှင့် SQLite databases များစွာကို ဖန်တီး၍ phpMyAdmin နှင့် SQLite Manager နှင့်အလွယ်တကူစီမံနိုင်သည်။
ဒီအခွင့်အလမ်းအတွက်ကျနော်တို့လုပ်ပါလိမ့်မယ် installation လုပ်ထုံးလုပ်နည်း de AMPPS ခေတ်သစ်နှင့်လက်ရှိအကြောင်းကို စက်လည်ပတ်ရေးစနစ် (Distro) အခြေခံ ဒေဗန် ၁၀.
အဆင့် 1 - AMPPS ကို Download လုပ်ပါ
၏ download အပိုင်းသို့သွားပါ AMPPS ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ရရှိနိုင်သောလက်ရှိဗားရှင်းကို download လုပ်ပါ GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များအောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း -
အဆင့် ၂ - AMPPS Installer ကိုအသုံးပြုခြင်း
ပထမ ဦး ဆုံးပေးရမယ် ကွပ်မျက်ခွင့်ပြုချက် Download လုပ်ထားတဲ့ Installer ကိုဖွင့်ပြီး၊ superuser အမြစ် သို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွင့်ပြုချက်ဖြင့်စနစ်အသုံးပြုသူအနေဖြင့် installer ဖိုင် ".run", ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအမှုအဘို့, ဖိုင်တွဲအတွင်း၌အမည်ရှိ၏ "ဒေါင်းလုပ်များ" လာမည့်: Ampps-3.8-x86_64.runအောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း -
အဆင့် ၃ - install လုပ်ထားသော AMPPS application ကိုဖွင့်ပါ
AMPPS လမ်းကြောင်းအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့် installed ဖြစ်ပါတယ် "/ Usr / local / ampps" ၎င်း၏အခြား built-in applications များနှင့်အတူ။ ထိုအခါကို run ဖို့ AMPPS install လုပ်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကို run သင့်သည် superuser အမြစ် သို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွင့်ပြုချက်ဖြင့်စနစ်အသုံးပြုသူအနေဖြင့် executable ဖိုင် အောက်ပါအမည်ဖြင့် "Ampps"အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း -
တပ်ဆင်မှုတွင်အမှားအယွင်းများမတွေ့ရှိရသဖြင့်ထရန်မလွယ်ကူပါ AMPPS အမြှင့်တင်ထားသောအိမ်သာအားလုံးကိုမတွေ့ရပါ Apache service ဒါအလုပ်မလုပ်ဘူး ဒါကြောင့်ငါမစတင်နိုင်ဘူး ဝဘ်ဆာဗာမကြည့်ပါ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ni el အသုံးပြုသူ Dashboard ကို de AMPPS။ ထိုအခါငါအကြောင်းမရှိဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ဘူး။ အစဉ်အဆက်၌, DEBIAN 10 ကျော် AMPPS ထက် XAMPP ကိုပေါင်းစပ်ထားသောအရာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်.
AMPPS ဝန်ဆောင်မှုမန်နေဂျာ အရာရာတိုင်းပြီးပြည့်စုံသွားရင်
AMPPS အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ လမ်းကြောင်းသုံးပြီးဝဘ်ဘရောက်ဇာမှတစ်ဆင့်: https://localhost/ampps-admin
AMPPS End User Dashboard လမ်းကြောင်းသုံးပြီးဝဘ်ဘရောက်ဇာမှတစ်ဆင့်: https://localhost/ampps
၏တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက် AMPPS GNU / Linux တွင်၎င်းကိုသင်စစ်ဆေးနိုင်သည် တရားဝင်ဝီကီနှင့်၏ဘာသာရပ်အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ် Tools များ အပေါ် GNU / Linux များကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောရေးသားချက်များကိုဖတ်ရန်အထူးအကြံပြုလိုသည် အယ်ဒီတာများ၊ IDE များ၊ SDK များနှင့်ဗားရှင်းထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အမျိုးအစားများ ဝဗ်ဆာဗာများ၊ Programming၊ Scripting နှင့် Markup ဘာသာစကားများ.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «AMPPS», ၏ပုံစံအတွက်အသုံးဝင်သော app ကို «Softaculous» လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံ၏စီမံခန့်ခွဲမှုခွင့်ပြု «Entorno de desarrollo» ငါတို့အကြောင်းကို အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း Operating Systemsတစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » AMPPS - GNU / Linux ရှိ Web Development Environment ၏ Softaculous
စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကမ္ဘာ့အင်ဂျင်နီယာနေ့ - မတ်လ ၄ ရက်